Lolaa Dirree Dawaa
Xumura torbanii irratti balaal lolaa dhaqqabeen abbootii warraa 400 maneen isaanii duraa manca’e gargaaruuf hojjetaa kan jiru ta’uu bulchiinsi Dirre Dawaa beeksisee jira. Karaa lolaan keessa darbu hojjechuf illee qarshii miliyoona 10 qopheesseera jedha. Balaan lolaa kun aanaalee naannoo uummattoota Kibbaa adda addaa keessatti illee mudachuun beekamee jira.
Dirree Dhawaa keessatti Jimaata darbe waaree booda balaan lolaa kun erga uumamee qabee qorannaa geggeessaa kan ture waajjiri qindeessa bulchiinsa soda balaa namoonni afur du’uu malee miidhaan ka biroon dhaqqabuu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Harbiin beeksisaniiru.
Balaan lolaa kun erga dhaqqabee booda namoonni nyaata guyyaa hamtuuf ol kaayyatanutuu hin hafin duraa manca’uu isaa VOAf ibsanii ganda magaalattii biraa deggersi godhamuufii isaa dubbatu jedha Addis Chekol Dirree Dhawaa irraa.